खेलकुद Archives - Page 24 of 35 - Dna Nepal
क्यूकोशिन कराँतेमा श्रेष्ठ ४ असार २०७५, सोमबार १४:५८
पोखरा, असार ४ । नेपाल शिन क्यूकोशिन कराँते संघ कास्कीको नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । संघको हालै बसेको एक भेलाले श्रीकृष्ण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा १३ सदस्य नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । संघको उपाध्यक्षमा सञ्जय बहादुर तामाङ, सचिवमा श्याँम..
विश्वकप फुटबल आजदेखि, कस्तो होला उद्घाटन खेल ? ३१ जेष्ठ २०७५, बिहीबार ०३:००
एजेन्सी, जेठ ३१ । फुटबलको महाकुम्भ विश्वकप आजबाट रुसमा सुरु हुँदैछ । राजधानी मस्कोको लुझनिकी स्टेडियममा विश्वकप फुटबलको भव्य उदघाटन समारोह हुनेछ । ८० हजार दर्शक क्षमता भएको यो स्टेडियममा ५०० कलाकारहरुले आफ्नो प्रस्तुती दिनेछन्..
कसले जित्ला विश्वकप ?, अध्ययनले यस्तो भन्छ (ब्राजिल सबैभन्दा अगाडी) २८ जेष्ठ २०७५, सोमबार ०३:४४
एजेन्सी, जेठ २८ । तथ्य विश्लेषण गर्ने अमेरिकी संस्था ग्रासनोटले विश्वकप २०१८ को नतिजाको प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । जसअनसार पाँच पटकको विश्वविजेता ब्राजिलले उपाधि जित्ने सम्भावना बढी देखिएको छ । ब्राजिलले पछिल्लो चार वर्षमा जम्मा चार खेल..
प्रदेश ४ राष्ट्रपती कप उपाधी कास्कीलाई २२ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ०४:१८
पोखरा, जेठ २२ । पोखरामा सम्पन्न प्रदेश ४ स्तरिय राष्ट्रपती कपको उपाधी कास्की जिल्लाले प्राप्त गरेको छ । दुई दिन सम्म चलेको प्रतियोगितामा कास्कीले कुल १८ स्वर्ण, ८ रजत ७ काश्य पदक प्राप्त गर्दै उपाधी हासिल गरेको हो । उपाधी संगै कास्कीले नगद २०..
स्पोर्ट्स अवार्डको पूर्वसन्ध्यामा टिभिएसको ¥याली, तयारी पूरा १७ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १२:३०
पोखरा, जेठ १७ । तेस्रो टिभिएस अपाचे पोखरा स्पोर्ट्स् अवार्ड २०७४ को पूर्वसन्ध्यामा मुख्य प्रायोजक बतास ब्रदर्श प्रा.लि. र आयोजक नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च कास्कीले विहीबार बिहान पोखरामा ¥याली निकालेको छ । युवाहरुमाझ लोकप्रिय टिभिएसको उत्पादन..
अन्नपूर्ण म्याराथनका धावक प्रस्थान, महोत्सवको तयारी पूरा १५ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ०४:४१
पोखरा, जेठ १५ । अन्नपूर्ण सेन्चुरी पर्यटन महोत्सवको तेस्रो चरणको मुख्य आकर्षण अन्नपूर्ण म्याराथनमा सहभागी हुने धावकहरु अन्नपूर्ण आधारशिविर प्रस्थान गरेका छन् । म्याराथनको प्राविधिक टोलीसहितका धावकहरुलाई आयोजक संस्था अन्नपूर्ण सेन्चुरी..
कास्की प्रदेश ४ स्तरीय उपराष्ट्रपति ‘चिल्डे«न गेम्स’को च्याम्पियन ८ जेष्ठ २०७५, मंगलवार १४:०९
पोखरा, जेठ ८ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति आयोजनामा मंगलबार सम्पन्न प्रदेश ४ स्तरीय उपराष्ट्रपति चिल्डे«न गेम्सको च्याम्पियन कास्की भएको छ । कास्कीले सहभागी प्रदेश ४ का ११ जिल्लालाई उछिन्दै च्याम्पियन बनेको हो । कास्कीले..
पोखरामा प्रदेश ४ स्तरीय उपराष्ट्रपति चिल्डे«न गेम्स हुने ६ जेष्ठ २०७५, आईतवार १०:४३
पोखरा, जेठ ६ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति आयोजनामा जेठ ८ गते पोखरा रंगशालामा ४ नं. प्रदेशस्तरीय उपराष्ट्रपति चिल्डे«न गेम्स संचालन हुने भएको छ । प्रतियोगितामा प्रदेश नं ४ का कक्षा ६, ७ र ८ मा अध्ययनरत १४ वर्ष सम्मका विद्यार्थीहरु..
असारको १ गतेदेखि स्नूकर प्रतियोगिता ४ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार ११:३९
पोखरा, जेठ ४ । असारको १ गतेदेखि पोखरामा कास्की जिल्लास्तरिय पाँचौ खुल्ला स्नूकर प्रतियोगिता हुने भएको छ। कास्की जिल्ला बिलियार्ड स्नूकर तथा पुल संघको आयोजनामा असारको ८ गतेसम्म प्रतियोगिता हुने संघले जनाएको छ। कास्की जिल्ला बिलियार्ड स्नूकर..